android ဖုန်းပေါ်တွင် Vkontakte ကနေသီချင်းနားထောင်မှပိုကောင်းဘယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
android ဖုန်းပေါ်တွင် Vkontakte ကနေသီချင်းနားထောင်မှပိုကောင်းဘယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်?
လူအပေါင်းတို့သည် functions တွေအပြင် VKontakte ကိတ်မိုဘိုင်းများအတွက်လျှောက်လွှာကိုသင်သီချင်းနားထောင်, သင်၏ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရဲ့ login ရှာဖွေရေးမှတဆင့်ရှာဖွေဖုန်းအတွက်ကယ်ဖို့, သူ့စံချိန်, မိတ်ဆွေများ၏စံချိန်, အုပ်စုများကိုနားထောင်ပြီးနောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ VC ကို, Music, အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီဂီတ applications များ, ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမြဲ VKontakte ကိတ်မိုဘိုင်း, အလဲလှယ်ဇုန်အောက်, က်ဘ်ဆိုက် spaces.ru အပေါ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်သည်အတိုင်းသင်တို့သည်, Google Market ကကနေကစား Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်အလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ application ကိုမအောင်မြင်ပါ, ဘယ်တော့မှမ, ကိတ်မိုဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်သင်၏ android app ပေါ်တွင်အသုံးပြုပါ။
ကိတ်မိုဘိုင်းသုံးစွဲဖို့က Android-အကောင်းဆုံး။ ဒါဟာအစ applications များပြသစာရင်းဂီတကိုသိုလှောငျ, ဒါမှမဟုတ်အီးဖုန်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ရုံကတဆင့်သင်လျှောက်လွှာများအမြောက်အများမှာဗီဒီယိုနှင့်အခြား buns ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကျနော်အကြံပေး!
အရည်အသွေးဂီတ .. Touch ကိုခုနှစ်မှာ .. အဘယ်သူမျှမရေခဲ! VC ကိုဂီတကြိုးစားခဲ့သည်။
ထိုအခါငါဘာမှနားမထောင်ကြဘူးသော်လည်းပဲငါဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အကြံပေး spetsialirizovannyh က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ။ သို့မဟုတ် torrent ကိုခြေရာခံ, type ကို rutor.org သို့မဟုတ် HHM-klab.me
သက်သက်သာအကြံဉာဏ်ကို။ (ကောင်းပြီ, ငါ esch ကျုံးမွေးဖွားခဲ့သည် .. :))
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,334 စက္ကန့်ကျော် Generate ။